သံလုံငယ် | About me
လွယ်ကူ၊ ရှင်းလင်း၍ လေ့လာရ လွယ်ကူစေရန် အသေးစိတ် ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်
သံလုံငယ် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ?
၂၀၀၇ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ IT Blogger တစ်ဦး … လေ့လာလိုစိတ်၊ သိလိုစိတ်တွေကြောင့် စာရေးတဲ့ ချာတိတ် … အသိမကြွယ်သေးပေမယ့် အားထုတ်မှု အချိန်ပေးနိုင်မှုတို့ကြောင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ် ရှိလာတဲ့ ဘလော့ဂါလေး … ၂၀၁၀ နှောင်းပိုင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကြောင့် Blog ဘက်မလှည့်နိုင်တော့ပဲ အဆက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ Blog မရှိတော့တဲ့ Blogger ဟောင်း … ၂၀၁၂ ကနေစပြီး အခြေအနေ ပြန်ပေးလာပေမယ့်လည်း ပြန်ရေးမယ် ပြောလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းနဲ့တူတဲ့ ပုံပြောသူကြီး … ယခုအခြအနေမှာတော့ (Blog ပေါ်ရောက်မလာခဲ့တဲ့ အချိန်အတွင်း) နည်းပညာနဲ့ အခြေပြုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိ Developer တစ်ဦး (အယ့်လယ်) …
ဘာကြောင့် သံလုံငယ် လို့ အမည်ပေးတာလဲ ?
သံလုံငယ် ဆိုတာ မွန်သူရဲကောင်း လဂွမ်းအိန် ကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ လဂွန်းအိမ် ဆိုတာ သိကြားမင်း ကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ လို့ မြန်မာအဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ လဂွမ်းအိန် ဘွဲ့မရခင် သာမာန်အညတရ ဘ၀ ငယ်အမည်က မသံလုံ ဖြစ်ပါတယ်။ (အဲဒီခေတ်က မွန်အမျိုးသားများကို မ တပ်ပြီးခေါ်ကြတာများပါတယ်။ မဂျိုင်း၊ မရူး စသဖြင့်ပေါ့)။ ဒီခေတ်မှာ မ တပ်ပြီး အမည်မှည့်ရင်အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ “နှင်းကေသရာ ချစ်တဲ့သူရဲကောင်း” ဝတ္ထုထဲက ဆရာပေးလိုက်တဲ့ နာမည်လေးကို သတိရလိုက်တယ်။ သုရှင်ရဲ့ ချစ်စနိုးခေါ်ဟန်လေးပေါ့။ သံလုံငယ် တဲ့။ မြန်မာစကားကလည်း “လေး” “ငယ်” စတာတွေပါရင် ဆဲတဲ့စကားတောင် ချစ်စနိုးနဲ့ ဖြစ်သွားတာဗျ။ “ခွေးကလေး” တို့ “မသာလေး” တို့ ဆိုရင် ကြားတာနဲ့ ကျီစားတာမှန်းသိတယ်။ ဘယ်သူမှ စိတ်မဆိုးဘူး။ “ကောင်လေးငယ်” “သားလေးငယ်” ဆိုပြီးခေါ်ရင် အရမ်းကို နွေးထွေးတဲ့ အခေါ်တွေ ဖြစ်သွားစေတယ်။ နှိမ့်ချရာကျတယ်လို့လည်း ခံစားမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ….. မိမိကိုယ်မိမိ ကလောင်ရှိစေခြင်းငှာ သံလုံငယ် ဟု သမုတ်ခဲ့ပါကြောင်း ….
ဒီဝက်ဆိုက်က ဘာအတွက်လဲ ?
အရင်အတိုင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ၊ အကူအညီဖြစ်စေမယ့် စာတိုပေစတွေ ပြန်ရေးမယ်၊ အပြင်မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ဒီပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်မယ် (ကြော်ငြာဝင်မယ်ပေါ့)။ ထပ်ပြီးတော့ အခမဲ့ ဆောင်းပါးတွေအပြင် တန်ဖိုးသင့် သင်ရိုးလေးတွေ လုပ်မယ်။ ဘာလို့အကုန် Free မပေးတာလဲ ဆိုရင် ရေရှည်မလုပ်နိုင်မှာစိုးလို့ (ဝင်ငွေလေးရှိနေမှ အချိန်ပေးပြီး လှည့်နိုင်မှာမို့လို့ပါ)။ အဲ့တော့ မင်းသားတွေတောင် ဈေးရောင်းနေတဲ့ခေတ်မှာ ကိုသံလုံငယ်ကြီးကိုလည်း အားပေးကြပါဦးလို့ …